Miyay Jirtaa Colaad U Dhexaysa Lionel Messi & Mauro Icardi? Icardi Oo Si Buuxda U Soo Bandhigay Aragtida Uu Lionel Messi Ka Qabo. - GOOL24.NET
November 21, 2018 Mahamoud Batalaale
Waxaa jiray warar badan oo laysla dhex marayay kuwaas oo sheegayay in Lionel Messi uu sabab u ahaa in Mauro Icardi aanu waqti dheer ka soo muuqan xulka qarankiisa Argentina iyada oo waliba la sheegay in Messi iyo Mauro Icardi ay jirto colaad ka dhexaysaa.
Laakiin Mauro Icardi ayaa soo bandhigay sida ayna u jirin wax xumaan ah oo u dhexaysa isaga iyo Lionel Messi wuxuuna taas badalkeeda rajeeyay in Lionel Messi uu ku soo laabto xulkiisa Argentina marka la gaadho tartanka Copa America ee sanadka cusub ee 2019.
Dhinaca kale Mauro Icardi ayaa sheegay in Lionel Messi uu yahay xidiga kubbada cagta aduunka ugu fiican isaga oo rajeeyay in uu kula soo laabto xulkiisa Argentina. Mauro Icardi ayaa goolkiisii ugu horeeyey ee Argentina dhaliyay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa gool dhalinta xulkiisa.
Tababaraha cusub ee xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa badalay xaaladii Argentina iyaga oo si buuxda u soo gaadhaya guulo xidhiidh ah waxaana kulankii ugu danbeeyay ee Mexico gool ka dhaliyay Mauro Icardi isaga oo hadda ka mid noqday xidigaha uu Lionel Scaloni ku xisaabtamayo.
Haddaba Mauro Icardi oo ka hadlaya Lionel Messi ayaa yidhi: “Isagu waa ciyaartoyga aduunka ugu fiican, isla markaana dhamaantayo waxaanu rajaynaynaa in uu nagu soo laabto, gaar ahaan Copa America ee soo socda”.
Icardi oo ka hadlaya xamaasadii xulkiisa iyo goolkii uu Mexico ka dhaliyay ayaa yidhi: “Gool la’aan ayaan ahaa, waan sugayay haddana waan faraxsanahay. Wax sahlan ma aha in aad ku socoto gool la’aan, dabeecad badan ayay abuurtaa, laakiin hadda waxaan doonayaa in aan sidan ku sii socdo”.
“Xaqiiqdii koox fiican ayaanu nahay, in badan ayaanu kori karnaa isla markaana waxaanu ku faraxsanahay shaqada Leo Scaloni, Walter Samual iyo Pablo Aimar. Dabcan waa xidhiidhka kubbada cagta kuwa mustaqbalkooda go’aaminayaa, laakiin waxaan sheegi karaa hadda in jawiga kooxda qaranku ay tahay si ayna abid hore u soo noqon”.ayuu Icardi hadalkiisa sii raaciyay.
Mauro Icardi ayaa doonaya in isaga iyo Lionel Messi ay ka wada ciyaaraan xulkooda Argentina gaar ahaan Copa America oo bilaami doona dhamaadka xili ciyaareedkan ee badhtamaha sanadka cusub ee 2019.